Ifekthri Yombhede | Abenzi Bombhede baseChina, Abahlinzeki
Yongsheng ekhaya black enkulu ...
Yongsheng ekhaya konke metal kube ...
Umbhede wombhede waseYongsheng, ...
Sonke isitoreji esingeziwe ofisa ukuba naso, sifihlwe ngaphansi kombhede wakho. Ngokufihla ngobuhlakani abadwebi abayisithupha abajulile abagijima ubude bombhede, uBlair unikeza isikhala esilingana nesembatho esivulekile. Ukuhlanganisa i-walnut efudumele kanye ne-accents yezibhamu, umbhede wesikhulumi unemigqa ehlanzekile nokuhlanganiswa kwezinto zezimboni.
Ufuna ukubuyisa umuzwa wentelezi edlule? Iphuphe, uyiphile nombhede wensimbi oyindlovukazi waseNashburg. Uhlaka olumnyama lwe-Matte olunezixhobo “ezibunjiwe” ngokukhazimulayo lilingisa imibhede yensimbi ebunjiwe kusukela kudala ukubukeka okulungele indlu yakho yasemapulazini yanamuhla noma ukuphunyuka kwe-cottage-quaint.